Vaovao - Ny fikarohana sy ny fampiharana oksizenina amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana
Momba ny AngelBiss
Vokatra & fampiharana
Masinina fitrohana fampiasana trano
Masinina fitrohana fitsaboana
Teknolojia sy serivisy
Teknolojia & Famokarana
Serivisy sy fiantohana
Vaovao sy famoahana
Ny fikarohana sy ny fampiharana ny oksizenina amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana
Oksizena dia iray amin'ireo singa amin'ny rivotra. Tsy misy loko, tsy misy fofona ary tsy misy dikany izany. Oxygen dia mavesatra noho ny rivotra. Manana hakitroka 1,429g / L eo ambanin'ny fari-pitsipika mahazatra (0 ° C sy ny tsindry atmosfera 101325 Pa), ary mety levona anaty rano izy io. Na izany aza, ambany dia ambany ny solubility. Rehefa 101kPa ny tsindry, ny oksizena dia lasa ranoka manga maivana eo amin'ny -180 ℃, ary manga mavomavo toy ny lanezy eo amin'ny -218 ℃.
Oksizenina dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny metalurgique, indostrian'ny simika, ny fitsaboana ny maloto, ny fitsaboana, ny fiainana, ny tafika ary ny aerospace sns
Ny fampiharana oksizenina amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana dia: famatsian-fofonaina ampiasaina amin'ny tontolo hypoxic, hypoxic na anaerobic, toy ny: hetsika antsitrika, fiakarana an-tendrombohitra, sidina avo lenta, fitetezana habakabaka, famonjena ara-pahasalamana, sns.
Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana miaina oksizenina dia matetika ampiasaina ho iray amin'ireo fepetra fanampiana voalohany ary ilaina amin'ny ekipa mpamonjy voina sy amin'ny fiara mpamonjy voina.
Amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana sy fikojakojana ny fiainana, ny mekanin'ny ôksizenina dia ny fitazonana ny tsindry sasany amin'ny oksiôma ao amin'ny ra arterial manakaiky ny haavon'ny normal, izay 13.3kPa (100mmHg).
Miaraka amin'ny fivoarana mitohy sy ny fanatsarana ny oxygen concentrator kely, ny fitsaboana oksizenina ao an-trano dia voamarina tamin'ny fitsaboana ara-pahasalamana. Izy io dia mety indrindra ho an'ireo marary efa antitra. Ny aretina tsaboina dia misy ny emysysema, ny bronchitis mitaiza, ny asma bronchiale, ny aretin'ny tuberkulose, ny pnemonia interstitial, ny bronchiectasis, ny homamiadan'ny havokavoka, sns.
Ny fitaovana fampiharana oksizena dia iray amin'ireo torolàlana fikarohana lehibe an'ny ekipa AngelBiss. Nahay ny teknolojia famokarana oksizenina tonga lafatra sy serivisy aorinan'ny varotra tsara izahay. Ary ny orinasa AngelBiss no voalohany eran'izao tontolo izao mifantoka amin'ny fiovan'ny oksizenina concentrator ary koa ny voalohany afaka mifehy ny tahan'ny fiovan'ny toetr'andro ao anatin'ny 0,1% hatreto (izay hatreto ny haavon'ny ambaratonga antonony indostrialy dia mihoatra ny 0,6%) . Mpifantoka oksizenina haavo anjely mizara 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro, ary mihoatra ny 18000 ora ny toky omena ny famatsiana oksizenina.
Amin'izay mety hitranga dia manambara izahay eto fa misy tranokala ofisialin'ny AngelBiss telo fotsiny, dia ny www.angelbisshealthcare.com, www.angelbisscare.com ary https://szcarvindu.en.made-in-china.com/. Mila mitondra fiara ...
Nahavita nisoratra anarana US tr ...
Angelbiss dia tsy marika fanta-daza manerantany fa marika marika tompon'andraikitra ihany koa. Manomboka amin'ny fananana ny vokatra teknolojia fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina ka hatramin'ny fahazoana fankatoavana amin'ny lafiny rehetra. Ity dia dingana iray amin'ny ...
Fahazoana ny Sectable Portable Rechargeable ...
Angelbiss dia namorona milina azo sotroina azo alaina azo alaina (AC, DC, bateria): AVERLAST 25B. Tsy ny tombony azon'ny Angelbiss fitaovana Suction Machine roa hafa: rafitra fiarovana avo roa heny amin'ny fiarovana ...
Angelbiss dia nisoratra anarana tamin'ny Germa ...
Angelbiss dia tsy marika fanta-daza manerantany fa marika marika tompon'andraikitra ihany koa. Manomboka amin'ny fikarohanay manokana sy ny fampandrosoana ny vokatra teknika, hatramin'ny fanekena ny lafiny rehetra. Dingana iray hanatsarana hatrany ny faha ...
Nanangana fiarovana fiarovana oxygène fa ...
2020.11.05, Angelbiss dia nametraka vondrona fifanakalozan-kevitra momba ny tsy fahombiazan'ny fiarovana amin'ny sehatra sosialy Facebook. Nahoana isika no tokony hametraka vondrona fifanakalozan-kevitra momba ny tsy fahombiazan'ny mpamorona ôksizenina? Satria rehefa miverina ...
Mpitafa oksizenina azo entina izay afaka ...
Ny concentrator oxygen oxygen portable Angelbiss dia afaka mihazakazaka 15000 metatra. Mba hanaporofoana fa ny concentrator oxygen oxygen portable Angelbiss dia azon'ny mpanjifa monina amin'ny faritra avo be. Tamin'ny taona 2018, ekipa R&D an'ny Angelbiss 'R ...
Hafatry ny taona vaovao avy amin'i AngelBiss COO
Salama ry mpiara-miasa, firariana soa ho anao sy ny orinasanay amin'ny taona vaovao 2021. Faly koa izahay fa manana ny firarian'ny taona vaovao ho an'ny ekipanay sy ny orinasantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Mety tsy mitovy ny fomba fijerintsika amin'ny teboka sasany, bu ...